एक्स्पोजरको कमीले हार्‍यौंः जगत टमाटा - Samadhan News
समाधान संवाददाता २०७६ मंसिर २३ गते १३:२९
जारी १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीबाट स्वर्ण पदकको आशा गरिएको थियो । त्यसमा पनि क्रिकेटका बादशाह मानिने पाकिस्तान र भारत नआउने भएपनि धेरैले विश्वासै राखेका थिए ।
तर, खेलमा नेपाल बंगलादेश र श्रीलंकासँग हार व्यहोर्दै फाइनल यात्रा नै रोकिएको छ । ती दुवै राष्ट्र टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्र हुन् । घरेलु मैदानमा टेस्ट राष्ट्रसँग नेपालको वर्तमान स्थिति मापन गर्ने यो समयमा नेपाल चुकेको छ । कहाँ कमजोरी र कहाँ उपलब्धि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीले पायो त ? नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटासँग समाधानकर्मी विकास रोकामगर र युवराज गुरुङ ‘युनिश’ले गरेको कुराकानीः
श्रीलंकासँग हारसँगै साग फाइनल यात्रामा पनि रोकिएको छ । आफैं भन्नुपर्दा खेल कस्तो रह्यो ?
हार्न हार्‍यौं त्यो स्वीकार्नै पर्छ । तर, श्रीलंका अनुभवी देश पनि हो । उसैलाई कम रनमै प्याक गर्ने हाम्रो प्लान थियो, त्यही प्लानअनुसार नै फस्ट इनिङमा एक्सिलेन्ट गरेका हौं । हो, हामी फिल्डिङमा केही कमजोरी पक्का भएको हो । २÷३ वटा क्याच गुमायौं । सायद त्यो क्याच लिन पाएको भए सिनारियो नै फेरिन्थ्यो । सिचुएसन नै अर्कै हुन्थ्यो ।
ब्याटिङमा पनि केही गर्छौं भन्ने सोचेका थियौं । ६ ओभरमै २÷३ विकेट गएपछि केही दबाबमा रह्यौं । तर, केही खेलाडीले राम्रो खेले । जस्तै रुविना, अप्सरी, कविताले पनि राम्रो खेलिन् । आफैं भन्नुपर्दाचाहिँ खेल हारेको भनेको एक्स्पोजरको कमी भएर हो । अहिले पनि हामीलाई एक्स्पोजरको कमी छ ।
३ वर्ष लामो क्रिकेट एसोसिएसन सस्पेन्सनमा रह्यो । भर्खरै त फुकुवा भएको छ । बल्ल त नेपाली महिला खेलाडीले यत्ति ठूलो इभेन्ट खेल्ने मौका पाएका छन् । त्यो पनि टेस्ट कन्ट्रीसँग । यो एउटा अनुभव हो । तर, मेरो हिसाबमा यो खेल राम्रो हो । खेलबाट हामीले कसरी क्रिकेट खेल्नुपर्छ भन्ने शिक्षा पाएका छौं ।
पोखरा क्रिकेट रंगशाला त आफ्नै घरेलु मैदान पनि हो । टेस्ट राष्ट्रसमक्ष हामी कहाँ छौं भन्ने ‘टेस्ट’ गर्ने एउटा मौका पनि थियो । तर, सजिलै हार व्यहोर्नुपर्‍यो । अझै धेरै कमजोर रहेछौं भन्ने लागेन ?
हामीसँग अझै टाइम छ । अहिलेदेखि नै हामी अभ्यास÷तयारी थाल्यौं भने अथवा नेपाल सरकारले केही हुन्छ । हुन त अहिले करिब ४ महिना क्याम्पमा बस्न पाएका छौं । त्यसले खेलाडीमा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट भएको छ । फिटनेसदेखि, बलिङ र ब्याटिङ स्ट्रेनथसम्म परिवर्तन भएको छ । सुधार भएको छ ।
अब भनेकोचाहिँ क्रिकेट एसोसियन नै हो । उसले खेलाडीलाई एक्स्पोजरको लागि छुट्टै प्लानिङ गर्नुपर्छ । कम्तीमा महिनाको एउटा खेल बाहिर खेलाउन सक्यो भने पनि धेरै हुन्छ । तब पो हामीमा सुधार आउँछ ।
यो क्रिकेट क्षेत्रलाई सुधार्न राज्यको तर्फबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
होइन, राज्यले त गरेकै छ नि ! थ्यांक्स फर गभर्मेन्ट । विशेषगरी यो लास्ट ३÷४ इयर्सदेखि क्रिकेटमा राज्यले गरेको लगानी गरेका मान्नै पर्छ । ग्राउन्डदेखि हरेक कुरामा सुधार गरिसकेको छ ।
अब कुरा भनेको क्रिकेट एसोसियसनको हो । गभर्मेन्टको आफ्नै ठाउँमा छ । तर, एसोसियसन आइसकेपछि उसको पनि रेस्पोन्सिब्लिटी देखिनुपर्छ । स्कुल, कलेज, यु–१९ सबैमा खेलाडी खोज्नुपर्छ । सिनियरदेखि जुनियरसम्मका खेलाडीको विकास गर्न छुट्टै कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।
यु–१९ लाई अहिलेदेखि नै प्रोमोट गर्दै गयो भने उनीहरुले पनि पछि राम्रो रिजल्ट दिन सक्छन् । सिनियरलाई एक्स्पोजर दिनुपर्‍यो । तबमात्रै हामी बलियो हुन्छौं । त्यसका लागि प्रोग्राम क्यालेन्डरचाहिँ बनाउनैपर्छ ।
सागका लागि अभ्यास कस्तो रह्यो ?
प्रिप्रियसन वाज भेरी गुड ! पहिलोपटक खेलाडीले आफ्नो जीवनकै लामो क्याम्प बसेका छन् । उनीहरुले धेरै सेक्रिफाइज गरेका छन्, यसैका लागि । कोही विवाहित पनि छन्, तर, उनीहरुले सबै त्यागेर सीर्फ क्रिकेट सोचे ।
उसो त हामीले कहिल्यै सोचेका थिएनौं कि यति लामो क्याम्पमा बस्न पाउँछौं भनेर । जहिल्यै १०÷१५ दिन क्याम्प बसेर क्रिकेट खेल्न जान्थ्यौं । तर, यसरी ४ महिना क्याम्पमा बसेर यहाँसम्म ल्याउनु धेरै राम्रो कुरा हो ।
अर्को खेल हामी तेस्रो स्थानका लागि फाइट गर्दैछौं, मेरो विचारमा त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो ।
बंगलादेश र श्रीलंकालाई छोडेर सागमा भारत र पाकिस्तान सहभागी भइदिएको भए नेपालके स्थान कहाँ हुन्थ्यो त ?
म सधै भन्दै आइरहेको छु – यो क्रिकेट हो के ! एउटा गेम हो । टेस्ट कन्ट्रीलाई थोरै रनमैम प्याक गर्न सक्छौं भनेर कहिले सोचेका थियौं र ? भयो त, होइन ?
हामीले एउटा टार्गेट बनाएका थियौं खेलका लागि । उनीहरुको खेल हेरिसकेपछि १२० भित्र प्याक गर्न सक्छौं भनेरै प्लानिङ गरेका हौं सक्सेस पनि भयौं । ब्याटिङमा हामी चुक्यौं, स्वीकार्छौं । तर, त्यसको कारण एक्स्पोजरको कमी नै हो । यो पनि हामी ४ महिना क्याम्पमा बसेर निकालेको रिजल्ट हो ।
आगामी दिनमा पनि इन्डिया, पाकिस्तानसँग एसोसियनले एक्स्पोजरका लागि केही सोच्नैपर्छ । हाम्रो नजिकका राष्ट्र नै क्रिकेटमा राम्रा छन् । म्याक्सिमम् गेम्स उनीहरुसँग खेल्न पायौं भने हाामी छिट्टै माथि उठ्छौं । अहिले पनि हामीसँग धेरै पोटेन्सियल खेलाडी छन् ।
इमान्दार भएर आफैंलाई समीक्षा गर्नुपर्‍यो भने नि ?
इमान्दार भएरै भन्छु – खेलाडीले धेरै हार्डवर्क गरेका छन् । २००७÷८ देखि क्रिकेटमा लागेका केटीहरु छन् । आजको डेटसम्म के पाए त उनीहरुले ? केही पाएको देख्नु भएको छ ? तब पनि उनीहरु निरन्तर देशका लागि खेलिरहेका छन् । अर्को खेल कास्यका लगि लड्यौं । त्यो पनि हामीले गलामा झुन्डाउने नै हो । के यो सफलता होइन ?